လျှပ်စစ်ရေနွေးငွေ့အလိုအလျှောက်ပျော့ပျောင်းသောနို့တိုက်စက် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
$75.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $93.99
မှစ. သင်္ဘောများ ပိုလန် ဆော်ဒီအာရေဗျ ပြင်သစ် ယူကရိန်း ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန် CN
plug အမျိုးအစား EU AU UK
အဖြူ / ပိုလန် / အီးယူ အဖြူ / ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား / အီးယူ အဖြူ / ပြင်သစ် / အီးယူ အဖြူ / ယူကရိန်း / အီးယူ အဖြူ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အီးယူ အဖြူ / စပိန် / အီးယူ အဖြူ / CN / AU အဖြူ / ပိုလန် / အာဖရိကသမဂ္ဂ အဖြူ / ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား / အာဖရိကသမဂ္ဂ အဖြူ / ပြင်သစ် / AU အဖြူ / ယူကရိန်း / အာဖရိကသမဂ္ဂ အဖြူ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ယူအက်စ် အဖြူ / စပိန် / သမဝါယမ အဖြူ / ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား / ယူကေ အဖြူ / CN / UK အဖြူ / ယူကရိန်း / ဗြိတိန် အဖြူ / ပိုလန် / ဗြိတိန် အဖြူ / စပိန် / ယူကေ အဖြူ / ပြင်သစ် / ဗြိတိန် အဖြူ / CN / အီးယူ အဖြူ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ယူကေ
လျှပ်စစ်ရေနွေးငွေ့အလိုအလျောက်ပျော့ပျောင်းသောနို့တိုက်စက် - အဖြူ / ပိုလန် / အီးယူ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE, GS, RoHS, CB
လည်ပတ်နှုန်း (RPM): 2800
ပါဝါ - 400W
ဗို့အား: AC အ 220-240V 50 / 60Hz
Net ကအလေးချိန်: 900g
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 9.8 x 9.8 x ကို 21.3 စင်တီမီတာ
At-Home ကဖေး - DEVISB Electric Milk Frother သည်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုနေ့တိုင်းအိမ်၌စိမ်းလန်းစိုပြေသော cappuccinos နှင့် Lattes တို့၏အရသာကိုပျက်စီးစေသည်။
အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့အမြှုပ်များ - အရသာကောင်းသောမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အပူရွေးချယ်စရာ ၄ ခုနှင့်အတူ - အမြှေးပါးမှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောအထူးအမျိုးအစားများကိုဖန်တီးသည်။
တာရှည်ခံခြင်းနှင့်စတိုင်ကျလှပသောဒီဇိုင်း - သန့်ရှင်းရေးနှင့်ရှည်လျားသောသက်တမ်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိနှင့်မကပ်သောအပေါ်ယံပိုင်းအတွင်းပိုင်း; ယိုဖိတ်မှုကို minimize လုပ်ဖို့ထောင့်မှထုတ်စက်။
သောက်သုံးရန်အကောင်းဆုံးအပူချိန်ဖြစ်သောနို့ကိုအပူပေးသောအခါနို့သည်အပူချိန် 60 ±5℃ (131 ℉ ~ 149 ℉) အထိအပူရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အပူလွန်ကဲခြင်းသည်နို့အာဟာရများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဤနို့ကိုအမြှေးသည်နို့ရည်နို့ရည်ကိုပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပရိုတိန်းနှင့်အဆီပါဝင်မှုသည်သင်၏နို့ကိုစုပ်ယူစေသည်။ နို့မဟုတ်သောနို့သည်စက်ရုံအခြေပြုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုမှာတသမတ်တည်းနည်းပြီးကွဲပြားနိုင်သည်။ နို့မဟုတ်သောနို့ကိုသာတိုက်ကျွေးပါကအပင်နို့အတွက်နို့ရည်ကိုကူညီသင့်သည့် Barista ပုံစံနို့မဟုတ်သောနို့ကိုတိုက်ကျွေးသင့်သည်။ Baroth ပုံစံမဟုတ်သည့်အပင်နို့အတွက် Froth ရလဒ်ကိုအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ကောင်းသော froth ရရှိရန်အဓိကအချက်မှာလတ်ဆတ်သောအအေးနှင့်နို့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ နို့သည်အအေးနှင့်လတ်ဆတ်သင့်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှတိုက်ရိုက်ယူခဲ့သောနို့ကိုချက်ချင်းစားပါ။ နို့ဟာအေးလေလေကောင်းလေ။ နို့အပူချိန်4~6around (39.2 ℉ ~ 42.8 around) ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
နို့ကိုအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင်နို့ကိုမထားပါနှင့်။ ၎င်းသည်နို့၏လတ်ဆတ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အသုံးပြုပြီးပါကနို့ကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့အမြဲထည့်ပါ။
MAX အဆင့်တွင်နို့ကိုဘယ်သောအခါမျှမဖြည့်ပါနှင့်။ သင့်လျော်သော whisk သုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ။ သက်ဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ နို့ကိုမနမ်းမှီ MAX Fill Line (၁၁၅ မီလီမီတာ) ။ နို့ကိုမဖြည့်ခင် MAX Fill Line (115ml) ။
အသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီကိုချက်ချင်းပုလင်းရှင်းလင်း။ ပူနွေးသောဆပ်ပြာရေကိုသုံးပြီးနံရံများကိုဆေးကြောပြီးသွေ့ခြောက်သောအ ၀ တ်ဖြင့်ခြောက်သွေ့ပါ။
1 x ကိုနို့ Frother
မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် 1 x
whisk နှိုးဆော် 1 x
ကောင်းပါတယ်!4ရက်အတွင်း Delivery!
Duge သည်စစ်မတိုင်မီ ၄ ရက်အတွင်းပို့ဆောင်ပေးသည်။
မတ်လ (၈) ရက်နေ့မှာအမှာစာပေးခဲ့တယ်။ အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်နို့ကိုမကောက်နိုင်တဲ့အမြှုပ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သေးတယ်။ Alpro ဟာအရည်ပျော်နေဆဲပါ၊ ကျွန်တော် Professional Series တစ်ခုကိုကြိုးစားပါမည်